Macluumaadka sida ku xusan § 5 TMG:
Taleefan (mashiinka jawaabta): 02129/5909099 (fadlan doorbid foomka xiriirka) MAYA taageero taleefan.
Mas'uul ka ah nuxurka sida ku xusan § 55 Abs. 2 RStV:
Evangelos Gatzelis, Sauerbruch Str. 2, 42781 Haan, Taleefan: +49 2129 590 90 99
Iimayl: vangelis [AT] windowspower.de
Mareeyaha iyo Milkiilaha Domainka:
vangelis.de naqshadeynta webka
Ma dammaanad qaadno in talooyinka iyo tabaha, maqaallada iyo macluumaadka la bixiyay ay sidoo kale ku gaari doonaan natiijooyinka la doonayo jawigaaga hawlgalka. Go'aanka ku saabsan haddii iyo qaabka aad u isticmaashid talooyinka iyo tabaha, maqaallada iyo macluumaadka la soo bandhigay haddaba adiga ayay kugu xiran yihiin.
Dhammaan talooyinka iyo tabaha, maqaallada iyo tilmaamaha halkan lagu bixiyey waa hantida www.windowspower.de
Taranka lama oggola oggolaansho cad mooyaane.
Uma maleyneyno wax mas'uuliyad ama dammaanad ah qoraallada, sawirrada iyo sawirrada aan loo baahnayn. Tifaftirayaashu mas'uul kama aha dulucda, saxnaanta iyo dhammaystirka nuxurka iyo macluumaadka laga helo mareegaha kale ee lagu gaaro xiriirrada dhijitaalka ah ee tooska ah ama aan tooska ahayn ("xiriiriyeyaasha"). Boggan waxaa loogu talagalay xallinta ugu yaraan 1024 × 768 gudaha TrueColor iyo MS Internet Explorer laga bilaabo nooca 5.5. Daalacayaasha kale ama xallinta hoose waxay u horseedi kartaa inay ku muujiyaan dhibaatooyinka mareegaha. Ogeysiiska mas'uuliyadda: In kasta oo si taxaddar leh loo xakameynayo waxa ku jira, waxaan u qaadaneynaa inaan wax mas'uuliyad ah ka ahayn waxyaabaha ku jira xiriirada dibadda. Hawl -wadeennada bogagga isku -xiran ayaa mas'uul ka ah waxa ku jira. Xuquuqda daabacaadda ee dhammaan sawirrada tifaftiran, garaafyada iyo qoraallada, haddii aan si kale loo sheegin si kale, la jiifso qorayaasha iyo sidoo kale mas'uuliyadda maaddada loo adeegsaday kiis kasta. Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 iyo Windows NT waxay ka diiwaan gashan yihiin Microsoft iyo calaamadaha ganacsiga Windows ee Microsoft.
Dhammaan alaabooyinka iyo summadaha waa xuquuqaha shirkadooda.
Barnaamijka iskaashiga Amazon
Websaydhka windowspower.de waa ka -qaybgale barnaamijka shuraakada Amazon EU, kaas oo loogu talagalay inuu bixiyo dhexdhexaad websaydhada taas oo Amazon.de dib -u -bixinta kharashka xayeysiiska lagu kasban karo meelaynta xayeysiisyada iyo isku -xidhka
Diidmada masruufka (Diidmada)
Mas'uuliyadda for content
Adeeg bixiye ahaan waxaan masuul ka nahay sida Ø 7 Abs.1 TMG ujeeddooyinka gaarka ah ee dhinacyadani sida waafaqsan sharciyada guud. Si kastaba ha noqotee, §§ 8 ee 10 TMG, si kastaba ha ahaatee, waxaan u adeegeeynaa adeeg bixiye inaanu kormeerno macluumaadka dibadda ama lagu keydiyo ama dib loo eego duruufaha tilmaamaya falal sharci darro ah. Waajibaadka saaran ama xannibaya isticmaalka macluumaadka sida waafaqsan qawaaniinta guud waa mid aan waxba laga qaban. Si kastaba ha ahaatee, masuuliyad ka saaran arrimahan, waxay suurtagal noqon kartaa oo kaliya laga bilaabo taariikhda aqoonta ee xadgudub gaar ah. Marka la ogeysiiyo xadgudubyada ku habboon, waxaanu ka soo saari doonaa waxyaalahan isla markiiba.
Dalabkeena waxaa ku jira isku xirnaanta bogagga dibedda ee dhinacyada saddexaad oo ku jira waxyaabaheena aan saameyn ku yeelan. Sidaa darteed, ma qaadan karno wixii mas'uuliyad ah ee ku saabsan waxyaabaha dibadda ah. Bixiyaha ama shaqaaleeyaha ka mid ah bogagga had iyo jeer masuul ka ah waxyaabaha ku jira bogagga la xariira. Bogagga la xariira waxaa lagu hubiyey xadgudubyada suurtagalka ah ee sharci ee la xidhiidha waqtiga isku xidhka. Waxyaabaha sharci darada ah lama aqoonsan wakhtiga isku xidhka. Si kastaba ha noqotee, kontroolka joogtada ah ee ku xiran boggaga la xidhiidha macquul maahan iyada oo aan caddayn caddayn ah ee ku xadgudubka Marka la ogeysiiyo xadgudubyada, waxaan isla markiiba ka saari doonaa xiriirintaas.
The content iyo shuqullo bogaggan ku abuuray by Hawlwadeenada goobta ku xiran yihiin sharciga copyright Jarmal. Koobiyeynta, tafatir, qaybinta iyo nooc kasta oo dhiig-miirashada ka baxsan xadka of copyright u baahan oggolaansho qoraal ah qoraaga ama abuure. Downloads iyo koobiyada la ogol yahay oo keliya ee gaarka, isticmaalka aan ganacsiga ahayn. Skokkelund content ee aan la abuuray by operator ah, copyright ee labada dhinac saddexaad. Qaadhaanka ah labada dhinac saddexaad waxaa lagu calaamadeeyay sida. weli tahay in aad ka war karo jebinta copyright, waxaan weydiin for oggayn. Marka wargelinta ah ee xadgudubyada, waxaan ka saari doonaa content isla markiiba.
18 saac kahor